Nigeria: Tonga ao Lagos ny tariby vaovao avy any anaty ranomasina ho an’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nigeria: Tonga ao Lagos ny tariby vaovao avy any anaty ranomasina ho an'ny aterineto
Voadika ny 15 Septambra 2009 7:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, English
Mahaliana ireo mpitoraka blaogy any Afrika Andrefana ny fahatongavan'ny tariby ambany ranomasina GLO-1 any Lagos tamin'iny herinandro iny. Mampifandray an'i Nigeria sy firenena 13 hafa any Afrika Andrefana ny GLO-1 amin'ny fotodrafitrasam-pifandraisana mandalo any Eropa, izay mitondra fatranonja [bandwidth] vaovao midadasika ho an'ny faritra.
Ny GLO-1 no tariby anaty ranomasina vaovao indrindra any Afrika.
Sarintany mandalo ny Many Possibilities.
Tamin'ny faramparan'ny volana Jolay, ny fahasimban'ny tariby SAT-3 — izay hatramin'ny herinandro lasa dia izy irery no làlana nahafahan'i Nigeria nifanerasera tamin'ny tambajotra maneran-tany— dia niantraika tamin'ny asan'ny banky sy ny fidirana amin'ny aterineto manerana ny firenena iray manontolo. Eo amin'ny 70 isan-jaton'ny fatranonja ampiasain'ny firenena no voadona.
Raha ny voalazan'ny lehiben'ny Globacom Limited, izay namatsy ara-bola ny GLO-1, ilay fotodrafitrasa vaovao dia afaka miatrika izay filàna fatranonja rehetra any Nigeria ho an'ny 15 hatramin'ny 20 taona ho avy. Miandrandra ny sanda mora kokoa sy manara-penitra ary hafainganam-pandeha malaky ireo mpitoraka blaogy.
Avy any Cameroon, manoratra i Bill Zimmerman :
Ny andrasana amin'ity tariby ity dia ny hampidinany ny vidin'ny fatranonja ary ny hanolorany hafainganana sy hamafisana amin'ny tolotra ho an'ny feo, data sy video. Ny sehatra ara-teknolojia any Afrika Andrefana dia tokony hahazo tombony amin'ny Glo-1 noho ireo orinasa ho afaka hifanerasera malalaka amin'ireo mpanjifa sy ireo mpiara-miombon'antoka any ivelany. Manome toky koa izy amin'ny hahazoana miditra amin'ny aterineto ho an'ireo olon-tsotra sy orinasa madinika izay tsy nanana fahafahana nanana ‘connexion’ manokana.
Ho an'i Yomi Adegboye ao amin'ny Mobility Nigeria, tsy mbola ato ho ato no ho tonga ireo fampanantenan'ny GLO-1:
Talohan'izao, niankina tamin'ny tariby SAT-3 ny firenena iray manontolo teo ambany ampihimamban'ny NITEL tamin'ny fidirana tanatin'ny ‘connexion haut-débit’. Am-bolana maro izao no mijery akaiky ny Glo-1 ireo mpanara-maso ny sehatry ny indostria, satria ny famoahana azy io dia hisy fiantraikany amin'ny sanda sy ny fidirana amin'ny aterineto haingam-pandeha ao Nigeria.
Amin'izao efa eto izao ny Glo-1, rahoviana marina no hanomboka hahazo fahafaham-po amin'ny tolotrasany isika?
Tsy manam-paharoa ny GLO-1 amin'ny maha-tariby anaty ranomasina voalohany indrindra eran-tany azy fehezin'ny tombontsoan'ny tsy miankina. Theresa Carpenter Sondjo ao amin'ny Appfrica dia manazava:
Ny ankamarony amin'ireo tariby anaty ranomasina, isan'izany ny SAT-3 izay mampifandray an'i Afrika Andrefana amin'ny firenena eran-tany, dia natsangan'ireo consortiums ivondronan'ny tsy miankina sy ireo orinasa (-mpanjakana). Tsy dia mahazatra loatra ny Glo-1 noho izy novatsian'ny GlobalCom avy ao Nigeria manontolo…. amin'izao fotoana izao i Nigeria dia miankina amin'ny ampihimamban'ny NITEL vao afaka miditra amin'ny toby fampifandraisana amin'ny SAT-3 ary tsy maintsy mividy fatranonja any amin'ny Benin mpifanila aminy.
Munashe Gumbonzvanda ao amin'ny TechMasai dia manampy:
Ny zava-mahaliana amin'ity tariby ity dia tsy toy ny ventures hafa sahala amin'ny Seacom [fanamarihana avy amin'ny mpanoratra: Seacom, tariby izay mampifandray an'i Afrika atsinanana amin'i Eropa sy Asia, nanomboka niasa tamin'ny Jolay 2009], fa ity dia famatsiana manontolo avy amin'ny Glo samirery. Goavana ny ho fiantraikan'ny Glo-1, nefa mety ho elaela vao ho hita taratra.. Toy ny tamin'ny Seacom, fotoana lehibe ho an'ny fiavaozana ara-teknolojika Afrikana sy ny fandrosoana izy ity.
Tantaran'ny Kamerona farany
14 Novambra 2020Afrika Mainty
Manameloka ny fanafihan'ny Boko Haram nandritra ny torimason'ny miaramila ny filohan'i Kamerona
26 Jolay 2020Afrika Mainty
Ebola mampitahotra: Voafandrika eo amin'ny sisintany iraisan'i Kamerona/Nizeria efa ho 40 ora mahery
14 Jolay 2020Afrika Mainty
Mitombo ny tranga COVID-19 ao Kamerona, mpitondra fivavahana iray milaza fa mety ny raokandrony
16 Febroary 2014Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Tantaram-Pitiavana Tsy Misy Oroka? Izany No Sinema Any Iran